Ny vokatra avy amin'izany dia manify - ireo vokatra mahomby indrindra -bola mpamono
Ny vokatra avy amin'izany dia manify - ny tena ilaina sy ambany kalorie
Mihinàna sy manjary mavesatra! Ity fehezan-teny ity dia mihamitombo kokoa hatrany ary tsy dia betsaka loatra amin'ny sakafo mahazatra amin'izao fotoana izao, toy ny ao amin'ny sakafo voatokana, izay ahitan'ny vokatra ankapobeny avy any. Tsy momba ny simia sy ny dokambarotra elixirs. Ny zava-drehetra dia voajanahary sy mahasoa avy amin'ny zavamaniry.
Ny sakafo kalorie faran'izay ambany indrindra amin'ny fahavoazana
Ny fototra iorenan'ny fitsaboana rehetra dia ny kalôria arakaraka ny kalôria amin'ny fatiantoka mavesatra:
Ny voly sy legioma toy ny cucumbers, mangatsiaka, voatabia, voatabiha, karajia, radisy, zarazara, zakiny dia mamela anao hanisy maromaro maromaro tsy misy atahorana amin'ny endrika, satria ny voka-dratsin'io vokatra io dia tsy mihoatra ny 25 kcal isaky ny 100 g.
Ny voankazo voankazo, indrindra ny voankazo voankazo, paoma sy pineapple dia hanampy amin'ny fandresena ireo hetaheta momba ny zava-mamy.
Torkia, hena bitro, henan'omby, totozy akoho , trondro, trondro mena, seafood. Ny karazana hena rehetra dia tsy mihoatra ny 130 kcal.
Ny kalea (5 kcal isaky ny 100 g) noho ny isa potipotika dia nanamafy ny lisitra hoe "inona no sakafo manampy amin'ny fihenam-bidy."
Ny proteinina vokatra ho an'ny vidy
Amin'ny fikarakarana ny sakafo proteinina dia lany ny 35% amin'ny kalitao nomena azy. Ary tsy misy mahagaga raha ao amin'ny rafitra PP ny vokatra izay manampy amin'ny fahazoana mavesatra dia manankarena proteinina.
Chicken Breast. Ny totalin'ny 110-120 kcal, izay 24 gr dia proteinina, dia safidy tsara ho an'ny sakafo antoandro, snack ary na ny sakafo hariva aza.
Milanja ronono tsy misy rà. Ny Curd (70 kcal / 17 g proteinina), yoghurt (50-60 kcal / 4 g proteinina), kefir (40 kcal / 3 g proteinina) - ireo "fanomezana avy any Burenka" ireo dia manimba tanteraka ny vatana, manala vinaingitra be loatra ary manangona tanteraka.
Holatra. Mofo mena dia tsy mihoatra ny 27 kcal isaky ny 100 g, raha 20-25% kosa ny proteinina.
Ny proteinina atody (44 kcal / 11 g proteinina) dia brenitra matavy. Saingy tsy mihoatra ny 2 isaky ny mihinana ny fihinanana, satria io ampahany amin'ny atody io no "mavesatra indrindra" - 352 kcal.
Ny vary trondro isan-taona dia tsy mihoatra ny 4% matavy. Cod, mpanangom-bokatra, manga mavo, fandatsaham-bato, tsako, lasaka dia tsy mihoatra ny marika 90 calories amin'ny kaloria.
Ny vokatra entin-kery matavy
Ny vokatra mahomby indrindra ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana dia ny vokatra miaraka amin'ny voka-dratsin'ny kalôria, ny famoahana ny vatany mandany hery bebe kokoa noho ny mitondra ireo lovia ireo.
Ny dite maitso dia manana kôlôma 0 kcal, ary mila kcal 20 kilaometatra isaky ny famoahana ny kaopy 1.
Ny Grapefruit dia be mpampiasa matavy ary dia mitarika ny vokatra tsara indrindra ho an'ny fahavoazana.
Fofona miavaka: chili, ginger sy ny tongolo gny biribiby tsy misy tsininy.
Seleria: handevona sela 100 grama, handany 30 kcal ny vatany, ary ny vatomamy dia manana mari-pahaizana mahery vaika amin'ny 12 kcal.
Ny pineapple dia tsy manandratra fotsiny ny peristalsis ao amin'ny tsina, fa manatsara koa ny metabolisma, anisan'izany ny fanesorana ny famoahana ny tavy ambany.
Ny vokatra azo avy amin'ny fibre diabetes ho an'ny fahavoazana
Raha manontany tsy tapaka ny fanontaniana mikasika ny sakafo entina haingana dia haingana sy azo antoka ianao, dia manoro hevitra anao ny hihaino ny sakafo manankarena amin'ny fibre.
Ny legioma maitso, anisan'izany ny seleria, ny karaoty, ny tsaramaso fitahirizana , ny zucchini sy ny cucumbers dia manatsara ny fatran'ny metabolisma ary manala ny vombon'ny fery amin'ny vatana.
Ny voankazo toy ny bukwheat sy ny afofandiovana dia karazana karbonidra sarotiny manana farafahakeliny farafahakeliny, izay mibaribary tanteraka ny vatany, manala ny metabolisma ary manakana ny fivoahana.
Ny tsaramaso miaraka amin'ny lentils dia loharanon'ny fibra sy proteinina.
Mihinana ny voankazo . Ny voany 200 g isan'andro dia ho fisorohana tsara ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fahampian'ny vitamin.
Sakafo tsy mifankafona rehefa very maina
Na dia ireo sakafo izay very maina dia mety hanimba ny tarehimarika raha toa tsy mety ny mampifamatotra izany. Ohatra:
Ny voankazo sy ny hazan-dranomasina ary ny trondro dia tsy mifanaraka afa-tsy amin'ny legioma. Ny potato dia tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny legioma azo ekena!
Ity fampifangaroan'ny vokatra ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana, toy ny koba sy ny hena, dia tsy mety mihitsy.
Ny atody dia tsy "namana" miaraka amin'ny ovy sy voatabia.
Ny voankazo sy ny vokatra avy amin'ny vokatra dia tsy mifanaraka tanteraka amin'ny inona, ary tsy anisany fotsiny. Tsara kokoa noho ny vokatra hafa izy ireo.
Tokony hesorina amin'ny mofo tsy misy fangarony miaraka amin'ny menaka na mofomamy tsara, satria mamy sy mangahazo - tsy mifangaro.
Sakafo hafakely no tsara sy ratsy
Kiribaty tsotra sy sarotra
Olivanina - Fahasalamana ara-pahasalamana
Sakafo Goat dia tsara
Voa maina - tsara sy ratsy
Ny tsy fisian'ny magnesium ao amin'ny vatana - ny soritr'aretina
Ny vadin'i Beyonce
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy?
Urticaria amin'ny ankizy
Kim Kardashian dia nampiseho sary tena laconic tao amin'ny antokon'i Marina Acton tao Hollywood
Polendvitsa ao an-trano - prescription
Zava-kendrina amin'ny alika - fomba hiadiana amin'ny olana
Kvass avy amin'ny mofo boribory
Sarim-pianakaviana sasantsasany eny amin'ny ranomasina
Taom-baovao tao Gatsby
Inona no loko mena?
Andro iraisam-pirenena misahana ny taxi